Bogga ugu weyn 16ka Meelood ee Adeegyada Taageerada Macmiilka ee ugu sarreeya sannadka 2022 -ka
Adeegga macmiilka oo tayo leh ayaa qayb muhiim ah ka ah ganacsi kasta oo doonaya inuu cabbiro. Si kastaba ha ahaatee, si joogto ah u fulinta adeegga macmiilka oo tayo leh guud ahaan suuqyada waaweyn ee suuqyada ma aha wax fudud gaar ahaan ganacsi yar.
Beddelka ugu wanaagsan ayaa noqon doona adeegsiga aaladaha adeegga taageerada macmiilka ee kuu fududaynaya inaad la socoto waxtarka iyo sidoo kale hagaajinta hufnaanta adeegga macmiilka ee aad ka fuliso meheraddaada.
Marka, inta maqaalkani si qoto dheer uga doodi doono aaladahaan, waxay sidoo kale wax ka qaban doontaa dhinacyada muhiimka ah ee barnaamijka adeegga macaamiisha u ciyaari karo ganacsigaaga.
Waa maxay Adeegyada Taageerada Macmiilka?
Waa maxay Faa'iidooyinka Software -ka Adeegga Macaamiisha?
Bixi gargaar aad u furfuran oo lagu kalsoonaan karo.
Ururi warcelinta macmiilka.
Wadashaqaynta ayaa ka waxtar badan
Kordhi xajmiga adeeggaaga
Falanqee oo ka warbixi natiijooyinkaaga
Waa maxay Noocyada Adeegyada Taageerada Macmiilka?
Software miiska adeegga -
Boostada la wadaago iyo barnaamijyada miiska caawinta -
Ilaha taageerada taleefanka -
Nidaamyada farriinta iyo hadalka -
Software -ka saldhigga aqoonta -
Maxay yihiin 16 -ka Sare ee Adeegyada Taageerada Macmiilka?
#3. Adeegga cusub
#5. Miiska Caawinta ProProfs
# 12. HubSpot
Qalabka Adeegyada Taageerada Macmiilku waa qalab uruurinta loo isticmaalo in la helo, la isku duwo, lagana warbixiyo codsiyada taageerada macmiilka.
Waxay maamuli kartaa hal ama dhowr kanaal isgaarsiineed, sida emayl, wada sheekeysi, qoraal, iyo is-adeegid. Waxay kaloo la macaamili kartaa aaladaha isgaarsiinta dibadda sida isku xirka bulshada ama hababka wada sheekaysiga bulshada.
Software -ka adeegga macmiilka waxaa badanaa adeegsada ganacsiyada si ay u oggolaadaan daryeel macmiil oo wax -ku -ool ah oo ay bixiyaan wakiilo adeegyo macaamiil oo badan.
Baadhid; Badeecad-Dhexdhexaad ah iyo Macaamiil-Qarshe: Qaabkee u Wanaagsan Ganacsigayga?
Waxaa hubaal ah inaad bixin karto taageero macmiil oo aad u fiican adigoon isticmaalin softiweer khaas ah, iyo ganacsiyo badan oo intarneedka ku bilowda wax yar oo ka badan cinwaanka iimaylka ee bilaashka ah. Dhanka kale, ganacsiyada soo koraya, waxay inta badan la kulmaan xaddidaadyo iyo cidhifyo adag.
Adeegsiga aaladaha taageerada macmiilka ee horumarsan ayaa kuu oggolaanaya inaad bixiso adeeg macmiil oo ka wanaagsan. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha ugu waaweyn ee u fududeeya isdhexgalka sida:
Qulqulka shaqada, sumadeynta, isdhexgalka saldhigga aqoonta, jawaabaha la keydiyey, iyo astaamaha kale ee softiweerka ah ayaa kooxdaada u oggolaanaya inay waqti badan ku bixiyaan u adeegidda macaamiisha iyo waqti yar oo ay kula dagaallamaan qalabkooda.
Aqoonsiga, uruurinta, iyo habeynta dhammaan dib u eegista faa'iidada leh, codsiyada muujinta, warbixinnada cayayaanka, iyo isticmaal kiisaska si loogu adeegsado horumarinta sheyga.
Software-ka taageerada macmiilku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad yareyso hawsha laba-laaban, la socoshada codsiyada macmiilka, abaabulo jawaabta kooxo dhowr ah, oo aad bixiso jawaabaha ugu dambeeyay.
Joogtayso adeeg tayo sare leh marka ganacsigu sii fidayo iyada oo la adeegsanayo softiweer kaas oo abaabuli kara dhowr kooxood oo wakiilo ah si ay ugu adeegaan saldhig macmiil oo weyn, iyo sidoo kale astaamaha abaabulka, otomaatiga, iyo is-dhexgalka aaladaha kale.
Adeegso astaamaha kormeerka ee ku jira barnaamijka adeegga macaamiisha si aad u fahanto hagaajinta mugga taageerada, niyadda kooxda, nooca macmiilka iyo cabbirka, iyo wax kaloo badan.
Maxay yihiin Noocyada Adeegga Taageerada Macmiilkas?
Ereyada “software -ka adeegga macaamiisha” iyo “software -ka taageerada macmiilka” waxay ka kooban yihiin codsiyo aad u kala duwan, laga bilaabo koonto Gmail oo lacag la’aan ah ilaa nidaamka xarunta wicitaanka ee shirkadaha.
Software -ka taageerada macmiilka, dhanka kale, waxaa badanaa loo kala saaraa mid ka mid ah lix nooc oo waaweyn:
Softiweerka miiska adeegga, oo la mid ah softiweerka taageerada miiska, ayaa caadi ahaan loo adeegsadaa hawlaha Maareynta Adeegga IT.
Waxay ku jiri kartaa tigidhada tigidhada iyo astaamaha miiska caawinta, laakiin sidoo kale waxaa ku jira aagag istiraatiiji ah sida codsiyada isbeddelka, dejinta adeegga, iyo maaraynta liisanka.
Sanduuqa la wadaago ayaa laga yaabaa inuu u fududaado sida dhowr qof oo u galaya hal cinwaan iimayl, laakiin erayadan badiyaa waxay khuseeyaan softiweer khaas ah oo leh astaamo dheeri ah oo loo isticmaalo in lagu helo, lagu maareeyo, looga jawaabo, laguna wargeliyo emaylka macmiilka xubno badan oo koox ah isla waqtigaas .
Taageerada taleefanku waxay leedahay taariikh ka dheer tan shabakadda ganacsiga, in kasta oo ay jiraan dhowr beddel oo cusub, haddana waa caan. Adeegyo badan oo fudud oo degdeg ah oo lagu taageerayo telefoonka, iyo sidoo kale noocyada casriga ah ee hababka xarunta wicitaanka ee waaweyn, ayaa suurtogeliyey telefoonka ku salaysan Internetka.
Muddo sanado ah, sheekaysiga tooska ahi wuxuu ahaa heerka adeegga macmiilka, laakiin farriinta ayaa dhawaanahan soo jiidanaysay. Labada gooboodba waxaa ku jira hab wada hadal badan oo lala yeesho la-xiriirka macmiilka, iyada oo sheekaysiga uu yahay mid dhab ah iyo farriin u oggolaanaya hab aan is-waafaqsanayn.
XIDHIIDHKA: Luqadaha Barnaamijyada ugu Mushaharka Badan 15 Sanadka 2022
Halkii ay ka ahaan lahayd jihaynta hal-hal ee aaladaha kale ee adeegga macmiilka, saldhig aqooneed waa aalad awood leh oo awood u siineysa wadaagista macluumaadka hal-ilaa-badan.
Macaamiil badan ayaa doorta inay iskood u adeegaan, iyo software-ka saldhigga aqoonta ayaa ka caawiya qabashada, qorista, iyo daabacaadda macluumaadka looga baahan yahay waayo-aragnimo is-adeegsi oo togan.
Akhri Sidoo kale: Adeegyada Mushaharka Ganacsi ee ugu Fiican - Lacag -bixinta Shaqaalaha ayaa la fududeeyay
Maxay yihiin 16 -ka ugu sarreeya Madal Adeegyada Taageerada Macmiilkas?
Waa kuwan 15 -ka ugu sarreeya Goobaha Adeegyada Taageerada Macmiilka ee aad dooran karto sannadkan 2022:
Miiska Caawinta ProProfs
Qiimaha: Laga bilaabo $ 19/bishii wakiil kasta.
Zendesk waa mid ka mid ah madalyada adeegyada taageerada macmiilka ugu wanaagsan oo caadi ahaan ay adeegsadaan meherado badan.
Waxay bixisaa xalal taageero oo aad u ballaaran, sida miiska caawinta, wada sheekaysiga tooska ah, iyo maamulka saldhigga aqoonta. Madalkani wuxuu ka caawiyaa Shirkadaha inay macaamiishooda kula xiriiraan dhexdhexaad kasta, sida warbaahinta bulshada, shabakadda, app -ka gacanta, emaylka, iyo taleefanka.
Ujeeddada ugu dambeysa ee Zendesk waa in laga caawiyo shirkadaha hagaajinta adeegga macmiilka, hoos u dhigidda kharashaadka taageerada, iyo kordhinta wax soo saarka.
Tusaale ahaan, Zendesk waxaa ku jira dhammaan ilaha miiska caawinta ee loo baahan yahay. Waxaa ka mid ah nidaamka ka shaqaynta tigidhada oo maamuli kara kumanaan tigidh maalin kasta oo ay maamuli karaan 5 ilaa 500 wakiil isku mar.
Intaa waxaa sii dheer, waxay u shaqaysaa sidii xariir dhexe oo loogu talagalay is -dhexgalka shabakadaha taageerada ee kala duwan, sida emaylka, shabakadda, hadalka, iyo warbaahinta bulshada.
Faa'iidada kale ee Zendesk ayaa ah inay leedahay macmiil u jeeda interface web oo aad ku calaamadeyn karto astaanta shirkaddaada.
Tan waxaa lagu dhejin karaa Xarunta Caawinta madal, oo ah barnaamij saldhig u ah aqoonta Quora halkaas oo macaamiishu ay ka hubin karaan jawaabaha ayna u heli karaan xalal dhibaatooyinkooda.
Si aad u dhammaystirto, madalku wuxuu ka kooban yahay astaamo gorfayn oo fududeynaya raadinta ka -qaybgalka macmiilka iyo helitaanka fikradaha fursadaha.
Qiimaha: Bilaash (Wakiilo aan Xad lahayn), Ubaxa: $ 19, Beerta: $ 35, Hantida: $ 49, Kaymaha: $ 89 (wakiil kasta, bishiiba, biil ahaan sannad walba) (qiimayaasha sare haddii bil walba la soo diro)
Freshdesk waa mid ka mid ah xalalka taageerada macaamiisha ugu caansan maalmahan. Barnaamijkan miiska caawinta waxaa ku jira inta badan ilaha iyo astaamaha ay adeegsadayaashu ka filan karaan softiweerka miiska caawinta dhaqameed.
Ilahaan waxaa ka mid ah nidaamyada tikitka otomaatiga ah, sanduuqyada taageerada kooxda oo dhan, taageerada macaamiisha bulshada, saldhigyada aqoonta ama xarumaha macluumaadka, iyo golayaasha bulshada.
Nidaamku wuxuu kaloo ka mid yahay astaamaha la socodka waqtiga tigidhka, kaas oo caawiya aqoonsiga caqabadaha hortaagan hawlgallada taageerada. Qorshahooda tijaabada bilaashka ah ee aadka u fiican, waxaad si fudud u go'aamin kartaa inay dabooli doonto baahiyaha ganacsigaaga.
Iyada oo leh aaladdeeda Arcade, Freshdesk waxay sidoo kale raacday isbeddellada gamification. Fikraddu waa mid aad u xiiso badan, maaddaama nidaamkani uu wakiillada ku abaal-mariyo dhibco tigidh kasta oo si guul leh oo waqtigiisu dhammaaday ah.
Sababtoo ah muuqaalkan hal-ka-gaarka ah, shirkaduhu waxay u beddeli karaan adeegga macmiilka khibrad raaxo leh naftooda iyo macaamiishooda labadaba.
Qiimaha: Bilowga ($ 19), Koboca ($ 49), Pro ($ 89), Shirkad ($ 109).
Software -ka ayaa sidoo kale loo heli karaa sidii barnaamij casri ah oo loogu talagalay Android, macruufka, Windows Phone, iyo aaladaha Blackberry, taas oo kuu oggolaaneysa inaad siiso taageero macaamiishaada xitaa intaad socoto ama aad ku raaxaysato guriga sariirtaada.
Freshservice waxaa loo aasaasay inay siiso taageero macmiil daruur heerka koowaad ah shirkadaha cabbir kasta leh. Qaab-dhismeedka waxaa loogu talagalay qaab-dhismeed ITIL oo dheel-dheel ah, taas oo u sahlaysa dadka isticmaala inay geeyaan oo isla markiiba ku daraan.
Falanqayn dhammaystiran oo ku saabsan macluumaadka Freshservice waxay muujineysaa in madalku u oggolaanayo adeegsadayaasha inay dhisaan saldhigyo aqooneed si fudud loo heli karo waxayna ku faanaan astaamo iyo shaqooyin yaab leh.
Intaa waxaa sii dheer, Freshservice waxaa ku jira aalado ka caawiya adeegsadayaasha inay diiradda saaraan diiradooda dhinacyada muhiimka ah sida maareynta iibiyaha, maareynta dhacdada, maareynta arrimaha, maareynta isbeddelka, iyo maareynta sii deynta.
Qalabkooda dhammaantood waxay u wada shaqeeyaan si ay u sameeyaan mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee taageerada macaamiisha.
Qiimaha: Tigidhka: $ 9, Tigidhka+Sheekaysiga: $ 29, Dhammaantood: $ 39 (wakiil kasta, bishiiba)
Halkaan waxaa ah deg deg deg ah oo LiveAgent ah: waa madal kale oo abaalmarin lagu guuleysto oo isku daraya kanaalada isgaarsiinta badan hal xarun. Gudaha dhexdiisa, waxaad ka heli doontaa dhammaan howlaha miiska caawinta ee muhiimka ah, sida wada sheekaysiga tooska ah, wadaagga faylka, foomamka isgaarsiinta, taageerada iimaylka, iyo is -dhexgalka warbaahinta bulshada.
Haddii aad rabto inaad ka gudubto awoodda miiska caawinta caadiga ah, waxaan soo jeedinaynaa inaad fiiriso suugaanta gammiska LiveAgent, xisaabaadka POP3, iyo xaaladaha dareenka leh, oo ka soocaya tartamayaasha. Sida Freshdesk oo kale, waxaa lagu siin doonaa tijaabo dhammaystiran oo bilaash ah si aad u aragto waxa softiweerku ku saabsan yahay.
Iibiyuhu wuxuu leeyahay xirmo tijaabo oo bilaash ah oo cajiib ah oo kuu oggolaanaya inaad tijaabiso dhammaan badeecadaha.
LiveAgent waa mid aad u fudud in la isticmaalo. Qaab -dhismeedku wuxuu bani -aadamnimada ka dhigaa waaya -aragnimada adeegga macmiilka wuxuuna siiyaa wakiillada marin -u -helka saldhig xog -uruurin oo ka caawin kara xallinta xaalad kasta.
XIDHIIDHKA: Immisa Muxuu Sameeyaa Kaaliyaha Caafimaad Usbuuc
Isla mar ahaantaana, waxay ka hortagtaa spam, waxay u oggolaanaysaa in loo habeeyo hawlgelinta la habeeyay, waxayna midaynaysaa kaydinta qaab fudud iyo codsi sanduuq. Waxay hagaajisaa hufnaanta shirkadda ee maaraynta weydiimaha (sababtuna tahay marinkii hore).
Waxay hagaajisaa hufnaanta shirkadda ee maaraynta weydiimaha. Si loo fududeeyo xitaa, LiveAgent sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa qiimeynta wakiillada shaqsiyeed iyo ka -faa'iideysiga aaladaha warbaahinta bulshada.
Akhri Sidoo kale: 12ka Siyaabood ee Ugu Wanaagsan ee Loogu Bixin Karo Wadahadalka Ingiriisiga 2022
Qiimaha: Bilaash ($ 0), Muhiim ah ($ 10), Premium ($ 15) bishiiba.
Miiska Caawinta ProProfs waa xal softiweer oo lacag la'aan ah kaas oo bixiya qaabab adeeg macmiil oo dhammaystiran. Is-dhexgalkiisa adeegsadaha-saaxiibtinimo wuxuu ku qalabeeyaa kooxaha taageerada dhammaan ilaha ay u baahan yihiin si ay uga shaqeeyaan arrimaha macmiilka si shaqsi ahaan iyo iskaashi ahaanba, taas oo u oggolaanaysa inay si wax ku ool ah wax uga qabtaan arrimaha.
Miiska Caawinta ProProfs wuxuu caawiyaa hagaajinta tigidhada adeegga macmiilka ee ka kala duwan kanaalada.
Dhinac kale oo ka mid ah Miiska Caawinta ProProfs waa saldhigga aqoonta is-adeegsiga, kaas oo gacan ka geysanaya yareynta mugga tigidhka illaa 80% wuxuuna siiyaa kooxaha taageerada dabacsanaan badan si ay xoogga u saaraan dhibaatooyinka u baahan kaalmadooda.
Miiska Caawinta ProProfs wuxuu kaloo siiyaa kheyraadka warbixinta maamulayaasha kooxda si ay ula socdaan guulaha xubnaha kooxdooda ee ku saleysan dib u eegista macmiilka, qiimeynta qancinta, iyo tallaabooyinka kale ee waxqabadka koowaad, ama KPIs.
Waxa kale oo aad horumarin kartaa sahamin shaqsiyeed si aad u ururiso dib u eegista macmiilka ee waqtiga-dhabta ah. Intaa waxaa sii dheer, ProProfs Desk Desk waxay bixisaa tababar onlayn ah oo ku saabsan kor u qaadista, dib -u -dilista, iyo ujeedooyin kale.
Qiimaha: Bilaash ($ 0), Muhiim ah (R190), Heerka (R280), Lacagta (R5,500) bishii
Ganacsatadu waxay isticmaali karaan MailChimp si ay u dhisaan, u keenaan, una kormeeraan wargeysyada iimaylka, foomamka is -qoritaanka, iyo casumaadaha dhacdooyinka.
Si kastaba ha noqotee, marka la fulinayo xalka software -ka adeegga macaamiisha, sida foomamka is -qoritaanka iyo marti -qaadyada dhacdooyinka, kooxuhu waxay shaqsiyeyn karaan emayl leh qaybaha macmiilka ee la beegsanayo.
Markaad tixgeliso adeegyadooda, waxaad ogaataa inay u kala sarreeyaan mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee taageerada macaamiisha.
Qiimaha: Bilaash: $ 0, Lite: $ 14.99, Pro: $ 24.99, Ganacsi: $ 39.99 (bishii wakiilkiiba)
Miyaad rabtaa inaad ku bixiso adeegga macaamiisha dalabka websaydhkaaga? Isku day ClickDesk, oo ah madal app-chat-live ah oo u oggolaanaya kooxda taageerada macmiilka ee shirkaddaada in ay sii wadaan wada-hadallo badan (oo ay ku jiraan sheekaysiga tooska ah, maqalka, iyo sheekaysiga fiidiyaha), sii ahaadaan kuwo isku-duuban oo ka jawaaba su'aalaha macaamiisha iyo cabashooyinka.
Wada sheekaysiga tooska ah ayaa sidoo kale lagu duubi karaa iyadoo la adeegsanayo Google Hangouts, taas oo ah ikhtiyaarka leh ClickDesk.
Qiimaha: Bil walba la soo dallaco: $ 17, Sanadle la soo dallaco: $ 15, Biil 2 -dii sanaba mar: $ 12 (wakiilkiiba)
Olark waa barnaamij kale oo adeegga macaamiisha ah oo mudan in la isticmaalo. Waa nooc ka mid ah abka wada sheekaysiga tooska ah oo si fudud loo habayn karo oo ay ku jiraan automation. Markaa, haddii aad raadinayso nidaamka taageerada wada sheekaysiga tooska ah, Olark adiga ayaa kugu habboon.
Waxaad si fudud u habayn kartaa wada sheekaysigaaga tooska ah si aad u matasho aqoonsiga shirkaddaada. Sifooyinkeeda otomaatiga ah waxay gaarsiiyaan macaamiisha salaanta iyo fariimaha gaarka ah iyagoo ku saleysan ficiladooda iyo wada hadalka kooxda.
Muuqaal kale oo weyn oo Olark ah ayaa ah awoodda si dhakhso leh looga soo ceshado aragtiyaha iyo xogta dhammaan qoraallada sheekaysiga tooska ah ee laga raadin karo websaydhka. Waxay sidoo kale la imaanaysaa tijaabo bilaash ah oo laba toddobaad ah, sahan wada sheekeysiga ka hor, iyo dib u eegista sheekaysiga.
Qiimaha: Bilowga: $ 16, Kooxda: $ 33, Ganacsiga: $ 50, Ganacsi: $ 149 bishii
La mid ah Olark waa LiveChat. LiveChat waa barnaamij wada sheekaysi toos ah oo deg-deg ah oo adeegsada oo la shaqeeya macaamiisha sida PayPal, IKEA, Huawei, iyo kuwo kale. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad isku darto in ka badan 130 aalado caan ah, sida Salesforce, Messenger, iyo Shopify.
Haddii aadan hubin inay adiga kuu tahay, waxaad had iyo jeer ku bilaabi kartaa tijaabo 30-maalmood oo bilaash ah oo ay ku jiraan astaamaha Kooxda.
Hal dhinac oo xiiso leh oo LiveChat ah oo dhif iyo naadir laga helo aaladaha kale ayaa ah inay ku dallacdo kursi kasta, iyo wakiillo badan ayaa wadaagi kara hal kursi. Heerka soo -qaadista daryeelka macaamiisha waa mid la mahadiyo maaddaama ay weli ka mid yihiin aaladaha adeegyada taageerada macaamiisha.
Qiimaha: Bilaash: $ 0 (3 wakiil oo lacag la'aan ah), Xirfadle: $ 12, Shirkad: $ 25 (wakiil kasta, bishii, biil ahaan sannad walba) (qiimayaasha sare haddii bil walba la soo dallaco).
Zoho, oo si fiican loogu yaqaanay xafiiskiisa shabakadda ku saleysan, wuxuu hadda bixiyaa codsiyo taageero macmiil oo buuxa oo la yiraahdo ZohoDesk. Waxaa ka mid ah Zia, sirdoonka macmalka ah, si loo taageero kooxda adeegga macaamiisha.
Tusaale ahaan, Zia waxay tusi kartaa wakiillada jawaabaha khuseeya su'aalaha macaamiisha si toos ah saldhigga aqoonta ee aad dhistay markii hore, taasoo u oggolaanaysa macaamiisha inay is taageeraan.
Macaamiisha ayaa sidoo kale si toos ah ula hadli kara ama ula sheekeysan kara Zia adiga oo adeegsanaya mareegahaaga ama barnaamijyada mobilada, Zia waxay ku jawaabi doontaa iyadoo ku saleysan saldhigga aqoonta.
XIDHIIDHKA: Sida Degdeg Loogu Noqodo Maamule Sare
Ka sokow sirdoonka macmalka ah, ZohoDesk wuxuu siiyaa aragtiyo kooxda adeegga macaamiisha, habaynta, iyo amniga. Sidaa darteed, waa mid ka mid ah aaladaha adeegyada taageerada macaamiisha.
Qiimaha: Bilaash: $ 0 (illaa 3 wakiil), qorshayaasha lacag -bixinta ah oo ka bilaabanaya $ 599 sanadkiiba 5 wakiil (qiimuhu wuu kordhaa marka wakiilladu kordhaan).
HelpSpot weli waa xalka software-ka-adeegga macaamiisha oo dhan-oo-hal ah kaas oo ay ku jiraan wax kasta oo qofku filan karo: ka shaqaynta tigidhada, otomaatiga, madal is-adeegsiga macmiilka, iyo kormeerka waqtiga-dhabta ah.
Nidaamkeeda maaraynta tigidhka ee hufan wuxuu si otomaatig ah ugu beddelaa iimaylka, wicitaannada taleefanka, foomamka, iyo API -yada. Tigidh kastaa wuxuu leeyahay milkiile gaar ah si looga hortago murannada iyo ismaandhaafka.
Sidaa darteed, abka ayaa sidoo kale si toos ah loogu dhex daray Thermostat si laguu suurogeliyo inaad horumariso, maamusho, oo aad soo gudbiso sahannada qancinta macmiilka. Cilladda ugu daran waa kharashkeeda xad -dhaafka ah.
Qiimaha: Waa bilaash.
HubSpot waxay bixisaa nooc bilaash ah oo madal CRM ah, oo ay si weyn u isticmaalaan ganacsiyada yaryar.
Si kastaba ha noqotee, barnaamijku wuxuu bixiyaa dhammaan astaamaha software CRM ee aasaasiga ah. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad la socoto dhaqdhaqaaqyada shirkaddaada, sida xiriirada iyo astaamaha shirkadda, meelaynta iyo la socoshada heshiisyada, iyo ku maareynta dhammaan xogtaas shaashad dhammaystiran (oo ay arki karaan dhammaan xubnaha kooxda).
Intaa waxaa sii dheer, waxaad u adeegsan kartaa barnaamijkan CRM si aad u kordhiso iibka gudaha. Ma aha in la xuso, HubSpot waxay leedahay ikhtiyaarro is -dhexgal oo leh barnaamijyo caadi ah sida SalesForce, Shopify, iyo Microsoft Dynamics. Sidaa darteed, waxay ku faantaa inay tahay mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee taageerada macaamiisha
Qiimaha: Si guud looma heli karo
Haddii barnaamijka moobiilka ee shirkaddaada la heli karo, markaa HelpShift ayaa adiga kugu habboon. Helpshift waxaa loo isticmaali karaa in si toos ah looga bixiyo adeegga macaamiisha taleefankaaga casriga ah. Macaamiishaadu maahan inay soo booqdaan degelkaaga, raadsadaan jawaabo, ama wac shirkaddaada. Helpshift wuxuu ka dhigaa helida jawaabaha mid fudud sida qoraalka oo kale, taasoo keenta khibrad macmiil oo ka sii wanaagsan.
Moreso, waxaa loo yaqaanaa hogaamiyaha suuqa ee taageerada app-ka, oo ku takhasusay taageerada app-ka ee aaladaha mobilada. Helpshift waxay bixisaa qiime la hagaajin karo, ku saleysan adeegsi si loo hubiyo in kooxdu bixiso kaliya waxay u baahan yihiin.
Waxaan aaminsanahay Helpshift inay tahay ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay kuwa raadinaya ka-dhex-dhexaadinta app-ka hantidooda guur-guura sababta oo ah qaab-dhismeedkiisa fudud iyo taageero xooggan oo ka socota kooxdooda.
Qiimaha: Qorshe Xoog Leh, $ 29/bishii wakiil kasta, Qorshe Fantastic ah, $ 49/bishii qof kasta, Qorshaha Ganacsiga, $ 69/bishii qof kasta, Qorshaha Plus Plus, $ 89/bishii isticmaale kasta.
HappyFox waxay si otomaatig ah u turjumi doontaa codsiyada taageerada ee laga soo sheegay kanaallo kala duwan-wicitaannada taleefanka, hadalka, emaylka, warbaahinta bulshada, iyo weydiimaha shabakadda-tigidhada ku jira nidaam miiska caawinta oo isku dhafan, oo wax ku ool ah. Dhibaatooyinka aadka u adag, madalku wuxuu aqoonsan karaa arrimaha caadiga ah iyo kiisaska la xiriira kooxda, iyo sidoo kale tigidhada kala qaybsan wakiilada badan.
Intaa waxaa sii dheer, HappyFox waxay dhexgaleysaa codsiyo ganacsi oo kala duwan, oo ay ku jiraan Google Apps, Salesforce, SugarCRM, Insightly, SurveyMonkey, iyo FreshBooks, si ay kaaga caawiyaan inaad hagaajiso taageerada macmiilka aaladaha shirkaddaadu ku tiirsan tahay inta badan.
HappyFox waxay bixisaa afar qorshe oo kala duwan. Qiimaynta qiimaha shaqsiyeed, fadlan la xiriir HappyFox.
Qiimaha: Qorshaha Guud ee xiga: Bilaash
ngDesk ayaa biilasha isku soo dalacda sidii “adeeg macmiil oo daruur ku salaysan oo bilaash ah.” Barnaamijku wuxuu isku daraa nidaam maareyn tigidh oo fudud oo leh ngDesk Pager, oo ah nidaam digniin shil toos ah.
Si loo helo xalka hal-hal ah, shirkaddu waxay dhowaan ku dari doontaa xalalka Live Chat, Taleefan, iyo CRM oo lacag la’aan ah.
Gabi ahaanba waa la beddeli karaa, sida inta badan softiweerka macmiilka, waxayna siisaa fikradaha ku saleysan xogta shirkaddaada. Waxay u shaqaysaa mid ka mid ah aagagga adeegyada taageerada macaamiisha ugu sarreeya.
Qiimaha: Pro ($ 79USD / mo), Koboca ($ 119USD / mo.), Awood ($ 149 USD / mo.) Farsamayaqaan kasta
Atera waa barnaamijka kormeerka iyo maaraynta fog (RMM) kaas oo siiya xirfadlayaasha IT -ga madal dhexe oo loogu talagalay hababka sida hawlgalka miiska taageerada, biilka, iyo warbixinta. Khubarada IT -ga iyo bixiyeyaasha adeegga la maareeyey ayaa si dhakhso leh wax uga qaban kara waxna uga qaban kara dhibaatooyinka macaamiisha iyagoo kaashanaya software -kan.
Marka loo eego jawaabcelinta adeegsadaha Atera, waa mid ka mid ah meelihii ugu horreeyay ee lagu daro RMM, marin -u -helka fog, iyo otomaatiga adeegyada xirfadda (PSA) hal software. Taas macnaheedu waa in Atera kaligeed dabooli doonto dhammaan baahiyahaaga IT -ga.
Qaaciddada dhabta ah ee GDP: Sida Loo Xisaabiyo Wax -soo -saarka Dhabta ah ee 2022 -ka
15 Qalab Wadashaqaynta Kooxda Xorta ah ee 2022 | Helitaanka waqtiga dhabta ah
Goobaha Tigidhada Ciyaaraha ee ugu Fiican ee Jaaleynta Tartanka 13 -ka
10 Best Casino Apps ee macruufka iyo Android
10 Meelood oo Iibsada Korontada Jaban 2022
20 -ka Meelood ee Suuqgeynta Suuqgeynta ee ugu Fiican Dunida Sannadka 2022 -ka
Suuqgeynta iimaylka waa mid haddii uusan ahayn kan ugu wax ku oolka badan suuqgeynta dhijitaalka ah, iyo muhiimadda iyo ku habboonaanta…
Waa maxay Sannadka ka dambeeya (yoy)?
Sannadba sanadka ka dambeeya ma yahay tilmaame hawl qabad maaliyadeed? Qiyaasaha iyo tilmaamayaasha ayaa aad muhiim ugu ah maamulayaasha iyo…
Barnaamijyada TV -ga Apple ee ugu Fiican ee Bilaashka ah 15
Sannadku markuu ahaa 2016-kii markii ugu horreysay ee App-ka Apple TV laga sii daayay dalka Mareykanka…
7 Beddelka ugu Wanaagsan ee Tampons
In kasta oo tampons-ka uu yahay mid ka mid ah wax-soo-saarka xilliga caadada ee ay dumarku isticmaalaan, dumar badan ayaa wali gala…
Intee in le'eg ayay Laabtoobyadu jiraan? | Goorta la helayo Mid Cusub
Macaamiishu waxay ka walaacsan yihiin inta ay laptops-ku jiraan. Dhammaan kumbuyuutarrada si isku mid ah uma abuuraan, sidaas darteed waxay sameeyaan…
Sida Looga Saaro Barnaamijyada Apple Watch 2022 | Tilmaan Buuxo
Barashada sida loo helo dariiqaaga agagaarka aaladahaaga tufaaxa waxay noqon kartaa mid adag mararka qaarkood gaar ahaan haddii aad…